बेड अभाव झेल्दै अस्पताल, अक्सिजनबिनाको शैय्यामा भर्ना हुन बाध्य सङ्क्रमित ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
'दैनिक ४०० अक्सिजनका सिलिन्डर खपत'
विराटनगर । २७ वैशाख, २०७८
प्रदेश १ सरकारले सञ्चालन गरेको विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा बेडको अभाव भएको छ । विराटनगर–१० मा रहेको कोसी कोभिड उपचार केन्द्रमा बेड अभाव भएसँगै सङ्क्रमित अक्सिजनबिनाको शैय्यामा भर्ना हुन बाध्य भएका हुन् ।
कोभिड अस्पतालका इन्चार्ज बैजनाथ साहका अनुसार बेड खाली नभएको अवस्थामा आइतबार रातिसम्म गरेर आठ सङ्क्रमित ल्याइएको थियो । बेड खाली नभएको जानकारी पाएपछि पनि सङ्क्रमितलाई अन्यत्र नलगेर एम्बुलेन्समै राखेको थाहा पाएपछि अस्पतालले अक्सिजनबिनाकै शैय्यामा राखेको थियो ।
‘हामीले बेड नभएको भनेर पठाएका थियौँ तर विवस उहाँहरूले कतै लैजान सक्नु भएन’, उनले केटिएम दैनिकसँगको कुराकानीमा भने, ‘सङ्क्रमितको एम्बुलेन्समै मृत्यु हुन हाम्रो मानवताले दिँदैन । यसैले अक्सिजनबिनामै बेडमा उपचार गर्दैछौँ । तर यसो गर्दा झन् जोखिम हुनसक्छ ।’ डबल भेरियन्टका सङ्क्रमितलाई अक्सिजन अनिवार्य भएका कारण अक्सिजनबिनाको बेडमा राख्दा जोखिम हुने उनले बताए ।
‘आफन्त निरीह हुन्छन्, अनुरोध गर्छन् तर दबाब दिन सक्दैनन्’, उनले थपे, ‘मान्छे मरिरहेको छ, समस्या छ राखिदिनू भन्छन् । यसैले पनि हामीले उहाँहरूकै रिस्कमा बिरामी राख्छौँ । दुःख लाग्छ, यस्तो समस्या भोग्नुपर्दा ।’
यो पनि : डा. सिग्देल : जसको आत्मविश्वासमा उभिएको छ कोसी कोभिड अस्पताल
दोस्रो लहरका कोरोना महामारी सुरु भएपछि कोसी कोभिडमा गत चैत २५ गतेबाट सङ्क्रमित भर्ना गर्न थालिएको हो । दुई साताअघि नयाँ भवनमा सारिए पनि १५ वटा बेडमा भने अक्सिजन पाइपलाइन जडान गरिएको छैन । त्यस्ता बेडमा सङ्क्रमित राख्नु जोखिम हुने उनले बताए ।
कोसी कोभिडमा ९६ बेड उपलब्ध छन् । त्यसमध्ये सोमबार बिहानसम्म ८८ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । आइसियूमा २१, एचडियूमा ४७ तथा अक्सिजनसहितको जेनेरलमा १५ जना उपचाररत छन् ।
दैनिक ४०० सिलेन्डर अक्सिजन खपत
कोसी कोभिडमा पछिल्लो समय दैनिक ४०० सिलेन्डर अक्सिजन खपत हुन्छन् । कोभिड अस्पताल संयोजक साहका अनुसार आइसियू र एचडियूमा मात्र ६८ जना बिरामी उपचार गराइरहेका कारण उनीहरूलाई दैनिक ठूलो परिमाणमा अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपरेको हो ।
‘दैनिक ४०० सिलेन्डर अक्सिजन खपत हुन्छ । गम्भीर अवस्थाका बिरामी धेरै भएका कारण अक्सिजनको खपत धेरै छ’, उनले भने, ‘यसरी हेर्दा अक्सिजनको मात्रा अझै बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ रकमको अनुपातमा भन्ने हो भने करिब डेढ लाखसम्मको खर्च अस्पतालले गर्दैआएको उनको भनाइ छ ।
कोसीको ननकोभिड अस्पतालमा भने १५ देखि २० वटा सम्म सिलिन्डर खर्च हुने कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट चुमनलाल दासले बताए ।
कोसी कोभिड अस्पतालमा गत चैत २५ गतेबाट हालसम्म गरेर १३५ सङ्क्रमित अस्पताल भर्ना भएका छन् । जसमध्ये १८ जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३४ पुरुष र १८ महिला गरे ५२ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।